TOP 10 kulan POKEMON ee Android
Next in Mario taaso taaso Pokemon ah la rumeysan yahay inuu taaso labaad ee ugu caan ah oo kulan. Games ka taxanahan lagu horumariyo oo loogu talagalay by Game xukun jecel & khayriga ah oo iyago .. Sida caadiga ah kulan ay ku jiraan labada ciyaaryahan ee kala duwanaanshaha slighter ka dibna raacay in sano qaar ka mid ah la sii daayo hore, remake cajiib ah ayaa la soo bandhigay. Tani taxanaha ee ciyaarta ayaa inta badan ku saabsan xujo door-ciyaareed iyo xayawaanka digital Qaar ka mid ah iyo sidoo kale ka jeclaa kulan Pokemon u Android, by taxanahan halkan waa in qoraalka hoos ku qoran. Qaar ka mid ah kulan ay ku baxday lacag aad iyo waxba waxaa laga helaa pokemon kulan Android qaybta lacag la'aan ah lagu kaydiyo play iyo Amazon iwm halka, qaar kale waa lacag dalbanayaan laakiin ma mid aad u sareeya si uu u jabiyo bangigaaga.
1. Terapets 2 Qabasho Epic wuxuush
Tani waa mid ka mid ah kulamada ugu jecel yahay Pokémon. Waxaa jira guud ahaan 300+ wuxuush iyo tiro ku dhow siman of godad, dagaal, evolutions, caqabadaha iwm Boqolaal weerar cusub ayaa lagu daray in kulankaan. Marka la soo koobo, waa si fudud u la yaab leh.
2. Dowladda bahal
Kulankaan ayaa sidoo kale waxa uu boqolaal wuxuush. All inaad samayso waa in ay ku qaadi soo saaraan sifooyin u gaar ah. In kulankaan, sifooyin waa lix tirada kuwaas oo dabka, dhulka, biyaha, hawada, mid quduus ah oo gudcur. Laba wuxuush qabtay ayaa sidoo kale lagu dari karaa si ay u sameeyaan mid ka mid ah xoog cusub. Dagaal ciyaartoyda waa dunida dacaladeeda. Muuqaalada ee ciyaarta ayaa waxaa ay dib u eegay sida quruxsan qabow.
3. bahal Squad
In kulankaan, taageerayaasha Pokémon leeyihiin inay la diriraan cadaawayaashooda oo ay maraan halka ka Sokeeye Dhigan nibiriyada awooda kala duwan. Waxay ku helay in ay isticmaalaan awoodooda iyo sidoo kale awoodaha saaxiibadood iyo wuxuush ay soo ururiyey ay si ay ula dagaalamaan colka caadi ah. Dagaalka ayaa sidoo kale waxaa la samayn karaa saaxiibadaa. Waxaa oo dhan oo ku saabsan, loolan dagaal iyo isa soo taraysa.
4. Fur bahal
Waxaa jira guud ahaan 150 wuxuush ka tirsan kulankaan taas oo ay tahay in la qabtay mid ka mid, loo tababaray ama la diriray. Marka laga reebo la cayaaridda saaxiibada, waxaa sidoo kale loo ciyaaray karaa kale dadka isticmaala internetka. Ayaa abuuray kulankaan ku faana oo interface user fudud.
5. Terapets 1 burburin Xayawaanka wuxuush
Waa ciyaar xiiso ah oo ku xidhan tahay si aad u hesho ka qayb-galayaasha israacisay in ay u mar ka dheer. Waxaa hoos timaado doorashada yaxaas. Ayaa ka fiican doorasho waa, si fiican fursadaha aad ku guulaysanayso badbaado. Mar kale, waxa ay leedahay 300+ wuxuush iyo noocyada 3 darsin. Waxaa jira isugeyn ah 100 heerarka iyo in ka badan 250+ weeraro.
6. Haypi bahal
Waxaa jira heerar ka badan boqol ee ciyaarta. Helitaanka qabsaday ee lacagta birta ah waa eego adag. Wuxuush joogona waxaa jira in boqolaal ka mid ah tirada halka qaybaha ama awooda waa sideed. Waxaa jira qaabab uu qabatimo sida tartanka sallaan oo abaaray ciyaaryahano dhowr ah dunida dacaladeeda ah.
Strike 7. bahal
In kulankaan, waxaad ka ciyaari kartaa iyada oo saddexdiisii ​​saaxiib waqti. Ha illoobin wax walba oo kale haddii aad soo bixi kulankaan sida ay tahay mid aad u qabsado oo uu leeyahay guud ahaan kun oo wuxuush taas oo ay tahay in la qabto oo loo tababaray.
8. bahal Island
5 jasiiradaha, 16 geesiyaal iyo 300 heerarka, waa wax aad ku wareegsan oo ciyaarta ka kooban. Naqshadeynta waa mid cajiib ah.
9. Terra wuxuush 2
Waxaad heshay in lagu furo qarsoon ee Afer. Dagaal waxaa loo sameeyaa kooxo in 3, 200 wuxuush ayaa in la qabsado oo loo tababaray. Ujeedada dhamaadka waa in ay nabad buuxda ku Land of Afer.
10. adkaada wuxuush
Waxaad si uu u noqdo tababaraha ugu weyn tahay yaxaas in kulankaan ay qaadaan nibiriyada xun. Qaababka kale ee ka mid ah soo dhameystay caqabado kala duwan oo loo yaqaan 'balaadhan' iyo sidoo kale ogaadeen jasiiradaha cusub. Sidoo kale, waxaad kula hadli kartaa saaxiibadaa.
> Resource > Emulator > Top 10 Pokemon Games u Android